मुख्यमन्त्री भलिबल कपः को पुग्ला फाइनल ? | eAdarsha.com
मुख्यमन्त्री भलिबल कपः को पुग्ला फाइनल ?
मुख्यमन्त्री कप गण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । शुक्रबार महिला तथा पुरुष दुवैतर्फ सेमीफाइनल खेल हुने प्रतियोगिता संयोजक खगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए ।
पोखरा रंगशालाको भलिबल कोर्टमा बिहीवार महिलातर्फको पहिलो खेलमा म्याग्दीले स्याङ्जालाई २–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै अन्तिम चारमा पुगेको छ ।
म्याग्दीले पहिलो सेट २५–०५ ले आफ्नो कव्जामा पारे पनि दोस्रो सेटमा भने २८–२६ ले संघर्षपूर्ण जित निकालेको थियो । दोस्रो खेलमा तनहुँले मुस्ताङलाई २५–७ र २५–९ को सोझो सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा म्याग्दीसँगको भेट पक्का गरेको हो । तेस्रो खेलमा पर्वतले नवलपुरलाई २५–८ र २५–५ सेटमा हराउँदा अर्को खेलमा कास्कीले बागलुङलाई २–१ सेटमा पाखा लगाउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गर्याे । १९–२५, २५–२३ र २५–१८ को सेट निकालेको कास्कीले जितसँगै फाइनल प्रवेशका साथ पर्वतसँग भिड्ने छ ।
उता, पुरुषतर्फ स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी र तनहुँ सेमीफाइनल प्रवेश गरेको छ । पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा स्याङ्जाले बागलुङलाई २५–२० र २७–२५ को सोझो सेटमा हराएको प्रतियोगिता संयोजक खगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए ।
दोस्रो खेलमा म्याग्दीले कास्कीलाई २५–१९ र २५–१२ को सेटमा पाखा लगाएको हो । तेस्रो खेलमा तनहुँले नवलपुरलाई २५–१८ र २५–२० को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो । पर्वत भने गोरखाले अन्तिम समयमा नखेल्ने जनाएको कारण सिधैँ सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो ।
शुक्रबार पहिलो सेमिफाइनलमा स्याङ्जाले पर्वतसँग र अर्को सेमीमा कास्की–तनहुँ आमनेसामने हुनेछन् ।
महिला–पुरुष दुवैतर्फ विजेताले २ लाख, उपविजेताले १ लाखसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ । तृतीयले ५० हजारसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै, सर्वोत्कृष्ट हुने महिला तथा पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट सेटर, डिफेन्डर, स्पाइकर र लिफ्टरलाई जनही ५ हजार पुरस्कार दिइने आयोजक कास्की जिल्ला भलिबल संघ अध्यक्ष भीम पराजुलीले जानकारी दिए ।